1. Ku saabsan rootiga Iyada oo la iidayo farxadda Waa lama huraan Sababtoo ah urta dufanka ayaa buuxiya guriga waxayna abuurtaa taabasho diiran inta lagu jiro xilliga soo socda. Laakiin waxyaabaha ku jira keega ee ka dhigaya kuwo qurux u leh inay cunaan kuna daraan freshness waa lama huraan subagga caanaha. Halkii aad ka iibsan lahayd supermarket ama rootiga rootiga Ma u muuqan karo mid gaar ah oo ma heli karo dhadhan gaar ah Maanta waxaan kuu sheegeynaa sida loo sameeyo subagga fudud ee qurxinta si loogu qurxiyo keega si loo abuuro dhoola cadeyn iyo farxad. Waa maxay caano subagga?
2. Aynu ogaanno waxa ugu horreeya caanaha subagga leh. Waa maaddooyinka inta badan loo adeegsado dubista iyo keega. Sidoo kale loo yaqaan dabo subag Waa inta ka hartay sameynta kareemka subagga. Tan waxaa loogu yeeraa qulqulka, dareeraha intiisa kalena waa caano-caano, qaabkeeda iyo curinteedu waxay lamid tahay caano la shiiday. Ama caano dhanaan Meelaha qaarkood sida Yurub Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay karinta Dadka qaarna waxay jecelyihiin inay cabaan maxaa yeelay waxay leeyihiin faa'iidooyin la mid ah caanaha, laakiin waa dufan la'aan. Qalabka Buttermilk • Isticmaal 1 koob caano dhan, caano aan caato ahayn (2% dufan) caano • asiidh dabiici ah sida liin dhanaanta ama 1 qaado oo cad cad. miis
3. Sida loo sameeyo subagga caanaha guriga lagu sameeyo Ku shub 1 qaado oo liin dhanaan ah ama vinaigrette halkii koob ee caano ah, doorbidayaa mid caadi ah ama 2% caano dufan leh, laakiin caanaha dufanka leh kuma haboona. Sababtoo ah waxaan u isticmaalnaa baruurta inay sababaan falcelinno
4. Isku walaaq maaddooyinka oo ka tag 5 - 10 daqiiqo, ka dibna si dhakhso leh ugu walaaq qaaddo cabbir ah. Ilaa ay caanuhu ka bilaabmaan inay isku milmaan buruqyo yaryar. Ilaa ay ka bilaabato dhumucdeeda Waa la isticmaali karaa Sida loo sameeyo subagga caanaheena ah ee guriga lagu sameeyo. Waxaa laga yaabaa inay bixiso natiijooyin aan u adkeyn sida kuwii laga soo iibsaday dukaamada waaweyn. Laakiin aaminsan nadaafadda Iyo dhadhan dabiici ah oo dabiici ah oo lagu qaso taxaddar si loo abuuro waxyaabaha ugu macaan ee ugu macaan qoyska.
5. Liiska lagu sameeyay subagga caanaha lagu sameeyo ee guriga lagu sameeyo Waxaa jira menus badan oo isticmaala subagga caanaha lagu sameeyo ee guriga lagu sameeyo. Ku shub canjeelada, ku qurxin miro iyo malab. Kani wuxuu yeelan doonaa cunto karinta khaas ah oo macaan oo udgoon leh dhadhan yar oo dhanaan iyo dufan leh oo lala cuno qoyska oo dhan.
6. Ama ku qas baradhada shiidan oo isku walaaq hal hilib. Waxaa loogu adeegay feeraha la dubay Waxay noqon doontaa mid aad u macaan. Qurxin roodhida keega ah ee qurxoon inta lagu gudajiro sanadka cusub. Xaqiiqdii wuxuu ka dhigi doonaa cabirka dhadhanka mid gaar ah Waxaa taas ka sii muhiimsan, waxaa lala samayn karaa qoyskaaga iyo carruurtaadaba. U oggolow subagga caanaha lagu sameeyo ee macmacaanka ah inuu kobciyo dhadhanka cuntadaada. Samee naftaada, quruxsan